ဤစာရွက်စာတမ်းသည်အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ အေဂျင်စီသဘောတူညီချက်တစ်ခုပြုလုပ်ရန် FLN LLC ၏တရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုယ်စားပြုသည်
၁.၁ ။ ဤစာရွက်စာတမ်းတွင်အောက်ပါဝေါဟာရများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဤစာရွက်စာတမ်းနှင့်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောပါတီများ၏ဥပဒေရေးရာဆက်နွယ်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
1.1.1 ။ အများပြည်သူကမ်းလှမ်းမှု, ကမ်းလှမ်းမှု- လိပ်စာရှိအင်တာနက်ရှိအင်တာနက်အရင်းအမြစ် (ဝက်ဘ်ဆိုက်) တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ပူးတွဲဖိုင်များ (ဖြည့်စွက်ချက်များ၊ ပြောင်းလဲမှုများ) ပါသည့်ဤစာရွက်စာတမ်းပါအကြောင်းအရာ - https://floristum.ru/info/oferta/.
1.1.2 ။သဘောတူညီချက် (အေဂျင်စီသဘောတူညီချက် / သဘောတူညီချက်) - ဤသဘောတူစာချုပ်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရောင်းသူနှင့်အကျိုးဆောင်အကြားချုပ်ဆိုထားသောမဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများပူးတွဲပါ ၀ င်သည့်သဘောတူညီချက်။
1.1.3 ။ ဝန်ဆောင်မှုများ - ဤ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များအပေါ်၊
1.1.4 ။ ကိုယ်စားလှယ် - LLC FLN ။
1.1.5 ။ ရောင်းသူ - ၀ ယ်ယူသူများကိုရှာဖွေရန် ၀ ယ်ယူသူအား ၀ ယ်ယူသူအား“ စတိုးဆိုင်” အဆင့်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြီးမြောက်ပြီးသောသူ / အသုံးပြုသူသည် ၀ ယ်ယူသူများကိုရှာဖွေရန်ယင်း၏အခြေခံပေါ်တွင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ထားသူအားအသုံးပြုသည် (နိဂုံးချုပ်) သဘောတူညီချက် / အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ ၀ ယ်သူများနှင့်သဘောတူညီမှု / အရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်ငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာလက်ခံမှု။
1.1.6 ။ အပေးအယူ - အရောင်းအ ၀ ယ်အရောင်းအ ၀ ယ်အရောင်းအဝယ်နှင့်သက်ဆိုင်သောမဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများကိုပူးတွဲထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဝယ်သူ (အေးဂျင့်) နှင့်ချုပ်ဆိုထားသောကုန်ပစ္စည်းများ (ကုန်ပစ္စည်းများ) ကိုဝယ်ယူခြင်း။ အရောင်းအဝယ်၏နိဂုံးနှင့်၎င်း၏ကွပ်မျက်ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးအပေါ်အများပြည်သူကမ်းလှမ်းချက်ကဆုံးဖြတ်သည့်ပုံစံနှင့်အခြေအနေများတွင်ထွက်ယူသွားတတ်၏။
1.1.7 ။ ဝယ်သူ - ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်၊ ၀ ယ်ယူရန် (၀ ယ်ယူရန်) ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့် / သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်ထားသူသို့မဟုတ်အသုံးပြုသူတစ် ဦး / အသုံးပြုသူ။
1.1.8 ။ ကုန်ပစ္စည်းများ - ပန်းချီကားများ၊ ပန်းတစ်ပွင့်၏ပန်းများ၊ ထုပ်ပိုးခြင်း၊ ကဒ်ပြားများ၊ ကစားစရာများ၊ အမှတ်တရလက်ဆောင်များ၊ ရောင်းချသူမှ ၀ ယ်သူအားသူကမ်းလှမ်းသောအခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။
1.1.9 ။ အလားအလာရှိသူဝယ်သူ၏အမှာစာ - အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်များအားလုံးပါ ၀ င်သော၊ ဝယ်သူမှထုတ်ပေးသောကုန်ပစ္စည်း (ထုတ်ကုန်အုပ်စု) ကို ၀ ယ်ယူရန်အမိန့်၊ ရောင်းသူမှပေးသောယေဘုယျအမျိုးအစားမှ ၀ ယ်ယူရန်အမှာစာ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သတ်သတ်မှတ်မှတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အထူးပုံစံ။
1.1.10 ။ ကမ်းလှမ်းချက်လက်ခံမှု - အဆိုပါရောင်းချသူအားဖြင့်လုပ်ဆောင်ချက်များအားဖြင့် irrevocable ကမ်းလှမ်းမှုကို၏လက်ခံမှု, ထိုကမ်းလှမ်းချက်၏အပိုဒ်9တွင်ထင်ဟပ်ခြင်း, ကိုယ်စားလှယ်နှင့်သက်ဆိုင်ရာရောင်းသူအကြားသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ် (လက်မှတ်ထိုး) ပါဝငျသညျ။
1.1.11 ။ ဝဘ်ဆိုက် / ဆိုက် - လိပ်စာရှိအထွေထွေအင်တာနက်ပေါ်တွင်တည်ရှိသောသတင်းအချက်အလက်အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်ထားသောစနစ်တစ်ခု https://floristum.ru
1.1.12 ။ ဝန်ဆောင်မှု - ဆိုက်နှင့်၎င်းပေါ်ရှိထုတ်ဝေထားသည့်သတင်းအချက်အလက် / အကြောင်းအရာများကိုပေါင်းစပ်ပြီးပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု၍ ရရှိနိုင်သည်။
1.1.13 ။ ပလက်ဖောင်း Agent ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲတို့ကိုဆိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားတယ်။
1.1.14 ။ ပုဂ္ဂလိကရုံး - ရောင်းသူ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာမျက်နှာ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်သောမှတ်ပုံတင်ခြင်းသို့မဟုတ်ခွင့်ပြုချက်ရယူပြီးနောက်သူသည် ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်။ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်သည်သတင်းအချက်အလက်များကိုသိုလှောင်ခြင်း၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ခြင်း၊ ဝယ်သူများထံမှအမှာစာများလက်ခံခြင်း၊ အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ကိန်းဂဏန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ငန်းတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်း၏တိုးတက်မှုနှင့်အသိပေးချက်အမိန့်အတွက်အသိပေးခြင်းတို့အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
၁.၂ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်တွင်၊ စာပိုဒ် ၁.၁ တွင်မဖော်ပြထားသောအသုံးအနှုန်းများနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီကမ်းလှမ်းချက်၏။ ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်သက်ဆိုင်ရာဝေါဟာရကိုအနက်ဖွင့်ဆိုချက်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၏ပါ ၀ င်မှုနှင့်စာသားများနှင့်အညီလုပ်ဆောင်သည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စာသားတွင်သက်ဆိုင်ရာအသုံးအနှုန်းသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအနက်ဖွင့်ဆိုခြင်းမရှိသောကြောင့်စာသား၏တင်ပြချက်အားလမ်းညွှန်ရန်လိုအပ်သည်။ ပထမအချက်မှာနှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်မတိုင်မီစာရွက်စာတမ်းများ၊ ဒုတိယအချက်မှာရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်စီးပွားရေးဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျအယူအဆအားဖြင့်ဖြစ်သည်။
၂.၁ ။ ရောင်းသူမှညွှန်ကြားချက်ပေးပြီး၊ အကျိုးဆောင်သည်အကျိုးဆောင်သည်အောက်ပါဥပဒေရေးရာနှင့်အခြားအမှန်တကယ်လုပ်ဆောင်မှုများ (နောင်တွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အေဂျင်စီ ၀ န်ဆောင်မှုများဟုလည်းခေါ်သည်) ကို၎င်း၏ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုသော်လည်း၊ ရောင်းသူ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုသတ်မှတ်ထားသောအခကြေးငွေအတွက်တာဝန်ယူသည်။ သိုမဟုတ်ရောင်းသူ၏ကိုယ်စားနှင့်ကိုယ်စား
၂.၁.၁ ။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်း (ထုတ်ကုန်အုပ်စု) အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာစွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်အရာများဖန်တီးခြင်းနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်၏သီးခြားအပိုင်း (စတိုးပရိုဖိုင်း) ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းအပါအ ၀ င်။
၂.၁.၂ ။ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အများပြည်သူကမ်းလှမ်းမှုမှသတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်အလားအလာရှိသည့် ၀ ယ်သူများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်သဘောတူညီမှု၏နိဂုံးချုပ်။
၂.၁.၃ ။ ဝယ်ယူသူများထံမှကောက်ယူထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များအတွက်အခကြေးငွေကိုလက်ခံပါ။
၂.၁.၄ ။ ဝယ်သူများထံမှရရှိသောတောင်းဆိုမှုများ (တောင်းဆိုမှုများ) အားလက်ခံခြင်းနှင့်လက်ခံခြင်းအားအရောင်းအ ၀ ယ်ပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်ရွက်သောတာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုရောင်းသူမှမလျော်ကန်စွာဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့်လက်ခံခြင်း၊
၂.၁.၅ ။ ၀ ယ်သူထံငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောနိဂုံးချုပ်အရောင်းအ ၀ ယ်များမှသတ်မှတ်ထားသောရောင်းသူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုဆောင်ရွက်ရန်။
၂.၁.၆ ။ Transaction နှင့် binding documents များမှသတ်မှတ်ထားသောအခြားတာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည်းဆောင်ရွက်ပါ။
၂.၂ ။ အကယ်၍ ၀ ယ်ယူသူသည်တရား ၀ င်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါက ၀ ယ်သူနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်စားအေးဂျင့်မှကောက်ချက်ချသည်ဟုမှတ်ယူပြီး၊ ဝယ်သူထံမှရရှိသောအမိန့်သည်ကုန်ပစ္စည်းများအားဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းဖြင့်ပေးချေသည်ကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူဆုံးဖြတ်သည်။ အခြားအခြေအနေများအားလုံးတွင်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်နှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ကို Agent မှရောင်းချသူကိုယ်စားဆောင်ရွက်ရန်စဉ်းစားရမည်။
၂.၃ ။ သဘောတူညီချက်အရအမိန့်ကိုဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုပြုလုပ်ရန်ရောင်းချသူမှကိုယ်စားလှယ်အားခွင့်ပြုထားသည်။
၃.၁ ။ အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ ("မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများ") ဖြင့်တည်ထောင်ထားသောနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကြားသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ်ရသည့်အဓိကကျသောအချက်မှာခြွင်းချက်မရှိလက်ခံခြင်းနှင့်ရောင်းသူမှသဘောတူညီချက်အောက်ရှိပါတီများ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြprovisions္ဌာန်းချက်များအားလိုက်နာမှုကိုသေချာစေရန်ဖြစ်သည်
3.1.1 ။ အသုံးပြုသူသဘောတူညီချက်တင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင် https://floristum.ru/info/terms/၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၏လိုအပ်ချက်များ (အခြေအနေများ) နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်အခြေအနေများပါ ၀ င်သည်။
3.1.2 ။ သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်တွင်ရရှိနိုင် https://floristum.ru/info/privacy/ရောင်းသူနှင့်ဝယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များအသုံးပြုခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းအတွက်စည်းမျဉ်းများပါ ၀ င်သည်။
3.1.3 ။ ဝယ်ယူမှုနှင့်ရောင်းချမှုသဘောတူညီချက်၏နိဂုံးချုပ်အတွက်အများပြည်သူကမ်းလှမ်းချက် - လိပ်စာရှိအင်တာနက်ပေါ်တွင်တင်ထားသော / https://floristum.ru/info/agreement/ ဤ ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ အရောင်းအ ၀ ယ်များ၏နိဂုံးချုပ်နှင့်လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သောမဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်များ (အခြေအနေများ) အပါအ ၀ င်ငွေသွင်းငွေထုတ်ရန်အပြီးသတ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်၏အဆိုပြုချက်။
၃.၂ ။ အပိုဒ် ၃.၁ တွင်သတ်မှတ်ထားပါ။ ဒီကမ်းလှမ်းမှု၏, ပါတီများအပေါ် binding စာရွက်စာတမ်းများဤကမ်းလှမ်းချက်နှင့်အညီနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ပါတီများအကြားကောက်ချက်ချသဘောတူညီချက်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
၃.၃ ။ ရောင်းသူ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရပြီးပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းခြင်းသည်စာချုပ်ပါအေဂျင်စီဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ခြွင်းချက်မရှိ။ မဖြစ်မနေလိုအပ်သောအချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ရောင်းသူသည်သတင်းအချက်အလက်များကိုအပြည့်အဝမပေးနိုင်လျှင် (ဆိုက်တွင်ဖော်ပြထားသောကဏ္filledများကိုဖြည့်ပါ) ၎င်းသည်မတိကျသောသတင်းအချက်အလက်များကိုပေးအပ်ခြင်းသို့မဟုတ်စည်းကမ်းချက်များကိုချိုးဖောက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်သည်သဘောတူညီချက်အရဝန်ဆောင်မှုများကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်သို့မဟုတ်ငြင်းဆန်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၃.၄ ။ ကိုယ်စားလှယ်အား ၀ က်ဘ်ဆိုက် (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်) ၏သက်ဆိုင်ရာစာမျက်နှာ (ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်) တွင်ဖော်ပြထားသောလိုအပ်သော၊ ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်ပစ္စည်းများပါရှိလျှင်ရောင်းသူ၏ဖော်ပြချက်အတွက်ပေးထားသောကဏ္ofများကိုပြည့်စုံစွာဖြည့်စွက်ပါကသင့်လျော်စွာပြီးမြောက်မည်ဟုယူဆသည်။ ကုန်ပစ္စည်း၏ဖွဲ့စည်းမှု၊ အမည်၊ ဓာတ်ပုံ၏ဓာတ်ပုံ၊ စျေးနှုန်း၊ ကုန်ပစ္စည်း၏အရွယ်အစား (အတိုင်းအတာ)၊ ဝယ်သူ၏အမိန့် (ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း) ၏စည်းကမ်းချက်များပါ ၀ င်သည်။
၃.၅ ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်တွင်ကိုယ်စားလှယ်အတွက်ရောင်းချသူ၏ညွှန်ကြားချက်များပြည့်စုံသောစာရင်းပါဝင်သည်။ အကျိုးဆောင်သည်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်၊ သို့သော်ရောင်းသူ၏ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်သူ၏အကြံပြုချက်များကိုဤကမ်းလှမ်းချက်မှချမှတ်ထားသောနည်းလမ်းများနှင့်အခြေအနေများမှထုတ်ပေးသောညွှန်ကြားချက်များပြင်ပမှကိုယ်စားလှယ်အားပေးအပ်ခြင်းကိုလက်ခံရန်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၄.၁.၁ ။ သဘောတူညီချက်နှင့်မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အညီရောင်းချသူထံမှရရှိသောလုပ်ငန်းများကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တည်ဆဲဥပဒေများနှင့်အညီဆောင်ရွက်ပါ။
၄.၁.၂ ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြု၍ သူ၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုရောင်းချသူမှနေရာချထားခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းအတွက်အခြေအနေနှင့်နည်းပညာစွမ်းရည်များကိုထောက်ပံ့ပေးပါ။
၄.၁.၃ ။ ဝယ်သူများထံမှရရှိသောအမိန့်များကိုရောင်းသူအတွက်အချိန်မီလွှဲပြောင်းပါ။
၄.၁.၄ ။ ရောင်းသူ၏တောင်းဆိုချက်အရရောင်းသူ၏ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်များ (အမှာစာများ) (ကုန်ပစ္စည်းများရောင်း ၀ ယ်ခြင်း) အကြောင်းသတင်းပို့ပါ။
၄.၁.၅ ။ ဝယ်သူများထံမှကိုယ်စားလှယ်များအမှန်တကယ်လက်ခံရရှိထားသည့်အရောင်းအ ၀ ယ်များအားငွေကြေးများအားသဘောတူစာချုပ်မှသတ်မှတ်ထားသောပုံစံနှင့်ပမာဏအတိုင်းငွေလွှဲခြင်း။
4.2 ။ အကျိုးဆောင်အခွင့်အရေး:
၄.၂.၁ ။ အကျိုးဆောင်သည်ဝယ်သူအားကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်း ၀ ယ်သူကသတ်မှတ်ထားသည့်ကုန်ပစ္စည်းများထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ငွေသွင်းငွေထုတ်ရန်ပြုလုပ်ရန်ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များနှင့်နိဂုံးချုပ်ငွေသွင်းငွေထုတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိသောအပိုဆောင်းအကျိုးကျေးဇူး (ငွေကြေးရန်ပုံငွေများ) သည် Agent ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်သည်။
၄.၂.၂ ။ အကျိုးဆောင်သည်ရောင်းချသူထံမှခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသည့်အခါအပိုဆုအစီအစဉ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ ရောင်းသူ၏ကုန်ကျစရိတ်အားဖြင့် ၀ ယ်သူများအတွက်အထူးလျှော့စျေးများကိုရောင်းသူမှသတ်မှတ်သည်ထက်ကုန်ပစ္စည်းတန်ဖိုးနိမ့်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ကောက်ယူနိုင်သည်။ ရောင်းသူသည်သက်ဆိုင်ရာအပိုဆုအစီအစဉ်များနှင့်အထူးလျှော့စျေးများတွင်ပါ ၀ င်ရန်သူ၏ရောင်း ၀ ယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်သဘောတူခွင့်ပြုသည်။
၄.၂.၃ ။ ကိုယ်စားလှယ်သည်သဘောတူညီချက်အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက် (သတင်းအချက်အလက်) အားလုံးကိုရောင်းသူထံမှတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိပြီး၎င်းစာချုပ်အားတာ ၀ န်ကျေပွန်နိုင်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်အားအခြားအပြည့်အ ၀ ကူညီပေးရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၂.၄ ။ Agent သည်သက်ဆိုင်ရာအတားအဆီးများကိုဖယ်ရှားသည်အထိကိုယ်စားလှယ်အား၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းကိုတားဆီးသည့်နည်းပညာ၊ နည်းပညာနှင့်အခြားအကြောင်းပြချက်များပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်စာချုပ်အရသူတို့ကို ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းကိုဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၂.၅ ။ အေးဂျင့်ကကိုယ်စားလှယ်အားသင့်လျော်သောပုံစံနှင့်ပမာဏ၊ ပစ္စည်း၊ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးရန်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့ခြင်းအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်ပါက ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်မှုကိုငြင်းဆန်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များနှောင့်နှေးခြင်း၊ တိကျသောအခြေအနေများရှိနေခြင်း၊ ရောင်းသူသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၌သာမကအခြားကိစ္စရပ်များတွင်ပါသူ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်းပြသခြင်း၊ ရောင်းသူကသဘောတူစာချုပ်အရယူဆရသောတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်အာမခံချက်များအားမဖြည့်ဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်မသင့်လျော်စွာဖြည့်ဆည်းခြင်းကိစ္စများ။
၄.၂.၆ ။ ကိုယ်စားလှယ်သည်ရောင်းသူအားအကြောင်းမကြားဘဲဤကမ်းလှမ်းချက်၏ပြဌာန်းချက်များနှင့်စည်းကမ်းချက်များ၌ကမ်းလှမ်းချက်၏လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများတွင်ထင်ဟပ်သကဲ့သို့ဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုတစ်ဖက်သတ်တရား ၀ င်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၄.၂.၇ ။ အကျိုးဆောင်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၊ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေများမှပြဌာန်းထားသောအခြားအခွင့်အရေးများကိုကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်လည်းရှိသည်။
၄.၃.၁ ။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများပေးပို့သည့်အချိန်ကိုမချိုးဖောက်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏အမှန်တကယ်အခြေအနေနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ပြချက်အကြားကွာဟမှုကိုခွင့်ပြုရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်သည်ဝယ်သူများနှင့်ချုပ်ဆိုထားသောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏အခြေအနေများကိုအပြည့်အဝနှင့်စနစ်တကျဖြည့်ဆည်းရန်တာဝန်ရှိသည်။
၄.၃.၂ ။ ရောင်းချသူသည် Agent အတွက်တာ ၀ န်တစ်ခုပြီးဆုံးချိန်တွင်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သောယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းအချက်အလက်များကို Agent အားအပြည့်အ ၀ ပေးအပ်ရန်တာဝန်ရှိသည်။ Agent သည်သက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုအတွက်ကိုယ်စားလှယ်မှသက်ဆိုင်ရာတောင်းဆိုမှုပေးပို့သည့် နေ့မှစ၍ ၂ ရက် (၂) ရက်ထက်ကျော်လွန်ရန်ဖြစ်သည်။
၄.၃.၃ ။ ရောင်းချသူသည်သင့်လျော်သောလက်ခံမှုကိုမပြုလုပ်မချင်းဖန်တီးထားသောသတင်းအချက်အလက်အရာများအပါအ ၀ င်လုပ်ငန်းစတင်စဉ်အတွင်း Agent ထံသို့ပေးပို့သောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများကိုစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
၄.၃.၄ ။ ရောင်းသူသည်သက်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သောလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ (တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုမိတ္တူများ) ကိုသူ့အားပေးအပ်ရန်အတွက်ကိုယ်စားလှယ်၏တောင်းဆိုချက်ကိုပေးပို့သည့်နေ့မှသုံးရက် (၃) ရက်ထက်မပိုစေရသေးပါ။ ကိုယ်စားလှယ်၏ပထမတောင်းဆိုချက်အရရောင်းသူသည်တာ ၀ န်ရှိသည်။
၄.၃.၅ ။ ရောင်းသူသည်အခြား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များ (အရင်းအမြစ်များ) တွင်ရောင်းသူမှသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်မပိုသောကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ရန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်တာဝန်ရှိသည်။
၄.၃.၆ ။ ရောင်းချသူသည်သူ၏ထုတ်ကုန်များနှင့်သက်ဆိုင်မှုရှိ၊ မရှိကိုစစ်ဆေးရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်သက်ဆိုင်သောသတင်းအချက်အလက်များ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းရန်နှင့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုရောင်းချသူမှသယ်ဆောင်။ မရပါ။
၄.၃.၇ ။ ရောင်းသူသည် ၀ ယ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏သက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရှိဥပဒေအရပြensure္ဌာန်းထားသည်။
၄.၃.၈ ။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သော ၀ ယ်သူများထံမှ ၀ င်ငွေတောင်းဆိုမှုများအပြင်သူတို့၏ပေးပို့မှုများကိုဖြေရှင်းရန်သူသည်ကိုယ်စားလှယ်အားပါ ၀ င်ခြင်းမရှိဘဲ ၀ ယ်သည်။
၄.၃.၉ ။ ရောင်းချသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်အေးဂျင့်အတွက်တာဝန်ဖြည့်စွက်သောအခါသူမှသတ်မှတ်ထားသောရောင်းသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းအပါအဝင်ကိုယ်စားလှယ်သည်ကိုယ်စားလှယ်မှဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ရရှိသောအသိပေးချက်များကိုလည်းစစ်ဆေးရန်တာဝန်ရှိသည် ရောင်းသူ၏အမှာစာများအကျိုးဆောင်၏ဆောင်ရွက်မှုတိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
၄.၃.၁၀ ။ ရောင်းချသူသည်သဘောတူညီချက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ မဖြစ်မနေလိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏တည်ဆဲဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များအားလုံးကိုလိုက်နာရန်တာဝန်ရှိသည်။
၄.၃.၁၁ ။ ရောင်းချသူသည်သဘောတူညီချက်၊ မဖြစ်မနေစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေများမှပြobligations္ဌာန်းထားသည့်အခြားတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်ကတိပြုသည်။
4.4 ။ ရောင်းသူ၏အခွင့်အရေး:
၄.၄.၁ ။ ရောင်းချသူသည်သဘောတူညီချက်အရသူ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုသင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာဖြည့်ဆည်းရန်ကိုယ်စားလှယ်မှတောင်းဆိုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၄.၄.၂ ။ ရောင်းသူသည်လက်ခံသူ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များ (အမိန့်များ) ကိုအပြီးသတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အစီရင်ခံစာများတင်ပြရန်ကိုယ်စားလှယ်အားတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၄.၃ ။ ရောင်းသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်ဆိုက်ကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းထားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၄.၄ ။ ရောင်းသူသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းလဲပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရောင်းသူမှပြောင်းလဲသောစျေးနှုန်းများသည် ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်၎င်းတို့ထုတ်ဝေသည့်နေ့စွဲနှင့် အချိန်မှစ၍ အကျိုးသက်ရောက်သည်။
၄.၄.၅ ။ ရောင်းသူသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်များနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေအရပြprovided္ဌာန်းထားသည့်ကိစ္စများတွင်သဘောတူညီချက်အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းကိုတစ်ဖက်သတ်ကြေငြာပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၄.၆ ။ ရောင်းချသူသည်သဘောတူစာချုပ်၊ သတ်မှတ်ထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေများမှပြဌာန်းထားသောအခြားအခွင့်အရေးများကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။
၅.၁ ။ သဘောတူညီချက်အရဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ကိုယ်စားလှယ်၏အခကြေးငွေကိုအောက်ပါအတိုင်းပေးဆောင်ရမည်။
၅.၁.၁ ။ ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ၀ ယ်သူမှ ၀ ယ်ယူခဲ့သောကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး၏ ၂၀ (နှစ်ဆယ်ရာနှုန်း)%၊ အကယ်၍ ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခ၏ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏကိုဤအပိုင်းသို့မဟုတ်ပါတီများ၏နောက်ထပ်သဘောတူညီချက်တစ်ခုဖြင့်မတည်ထောင်ပါက၊
၅.၁.၂ ။ "အပိုင်းအစဖြင့်အမိန့်" ဝက်ဘ်ဆိုက်၏သင့်လျော်သော function ကိုအသုံးပြု။ အပိုင်းအစအားဖြင့်မှာယူကြသည်ကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုး 5.1.2 (ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း)%;
၅.၁.၆ ။ အပိုဒ် ၅.၁.၁ - ၅.၁.၅ အရကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခလစာကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ဒီကမ်းလှမ်းမှု၏, ကုန်ပစ္စည်းများ၏စျေးနှုန်းကိုအသုံးပြုသည်, ထို Agent မှအလုပ် (အမိန့်) ဖြည့်သည့်အခါရောင်းသူကညွှန်ပြသော။
၅.၂ ။ အကျိုးဆောင်သည်ရောင်းသူမှသတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဝယ်သူနှင့်ငွေပေးငွေယူခြင်းကိုအဆုံးသတ်သောအခါ၊ ထိုကဲ့သို့သောလုပ်ရပ်များနှင့်နိဂုံးချုပ်ငွေသွင်းငွေထုတ်၏ရလဒ်အဖြစ်ရရှိသောအပိုအကျိုးကျေးဇူးသည်အေးဂျင့်၏ပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပြီး၎င်း၏စီမံခန့်ခွဲမှုသို့အပြည့်အဝလွှဲပြောင်းသည်။
၅.၃ ။ အေးဂျင့်မှရိုးရှင်းသောအခွန်ကောက်ခံမှုစနစ်ကိုကျင့်သုံးခြင်း (ဆောင်းပါး ၃၄၆.၁၂၊ ၃၄၆.၁၃ နှင့်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၆.၂) ကြောင့်ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခကိုထပ်တိုးအခွန်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
၅.၄ ။ Agent ၏လုပ်ခလစာအပြင်နောက်ထပ်အကျိုးခံစားခွင့်များကိုဝယ်ယူသူမှဝယ်ယူသူထံမှငွေပေးချေမှုအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာများမှရရှိသောငွေပမာဏကိုအေးဂျင့်မှတားဆီးခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ ၀ ယ်သူသည်နိဂုံးချုပ်အရောင်းအ ၀ ယ်အနေဖြင့်ရောင်းသူအားတိုက်ရိုက်ငွေပေးချေလျှင် (ဥပမာ - ကုန်ပစ္စည်းများကိုလက်ခံရရှိသည့်အခါငွေသားဖြင့်)၊ ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခကိုရောင်းသူမှကိုယ်စားလှယ်သို့ငွေ (၇) ရက်ထက်နောက်မကျစေဘဲပေးချေရမည်။ အေးဂျင့်မှငွေပေးချေမှုအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာရက်စွဲ။
၅.၅ ။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်သူများထံမှရရှိသောငွေပေးချေမှုကိုအေးဂျင့်မှရောင်းချသူထံလွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။ ကိုယ်စားလှယ်၏အခကြေးငွေအပြင်ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များကိုလည်းပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်တောင်းဆိုသည့် နေ့မှစ၍ (၇) ရက် (၇) ရက်ထက်မပိုစေရ။ ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိရောင်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်ရှိအကောင့်မှရန်ပုံငွေရောင်းသူ https://floristum.ru
၅.၆ ။ အကယ်၍ ၀ ယ်သူသည်ကုန်သွယ်မှုပြီးဆုံးသောကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်ပေးချေမှုကိုပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်တောင်းဆိုပါကအေးဂျင့်သည်သတ်မှတ်ထားသောလိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးလျှင်ရလဒ်အနေဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်လက်ခံရရှိသည့်ငွေပမာဏကိုအေးဂျင့်၏လစာနှင့်အပိုအကျိုးခံစားခွင့်များကိုလွှဲပြောင်းပေးရပါမည်။ ၀ ယ်သူ၏တောင်းဆိုချက်များကိုငြင်းဆန်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် နေ့မှစ၍ ရောင်းသူအား (၃) ရက် (၃) ရက်ထက်နောက်မကျစေဘဲရောင်းချသူအား
၅.၇ ။ သဘောတူညီချက်အရငွေပေးချေမှုများသည်တာ ၀ န်ကိုပြီးစီးသောအခါဆိုက်တွင်ထင်ဟပ်သည့်ငွေပေးချေမှု ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြု၍ ပြုလုပ်သည်။
၆.၁ ။ အကျိုးဆောင်သည်ရောင်းချသူအားသဘောတူညီချက်အရပြီးပြည့်စုံသောတာ ၀ န် (Agent) ၏ပုံစံနှင့်အညီ ("နောင်တွင်အစီရင်ခံစာ" ဟုခေါ်သည့်) တာ ၀ န်ထမ်းဆောင်ခြင်းအကြောင်းအစီရင်ခံစာအားရောင်းသူအားပေးသည်။ ဤအစီရင်ခံစာသည် ၀ န်ဆောင်မှု၊ ရောင်း ၀ ယ်မှုများကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခလစာပမာဏနှင့်လွှဲပြောင်းပြီး / သို့မဟုတ်ရောင်းသူသို့လွှဲပြောင်းရန်လိုအပ်သည့်ငွေကြေးများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များကိုဖော်ပြထားသည်။
၆.၂ ။ သဘောတူစာချုပ်အရပြက္ခဒိန်လသည်အစီရင်ခံရသောကာလ (နောက်ပိုင်းတွင်“ အစီရင်ခံခြင်းကာလ”) ဖြစ်သည်။
၆.၃ ။ ပေးအပ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခပမာဏ၊ အပိုထပ်ဆောင်းပေးချေမှုများနှင့်အသုံးစရိတ်များ၊ ကောက်ချက်ချသည့်အရောင်းအ ၀ ယ်အနေဖြင့်ရောင်းသူသို့လွှဲပြောင်းရန်ငွေပမာဏနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များသည်ကိုယ်စားလှယ်၏ပြည်တွင်းစာရင်းကိုင်စနစ်အချက်အလက်များ၏အခြေခံပေါ်တွင်ထင်ဟပ်နေသည် သက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာ၌တည်၏။
၆.၄ ။ ၀ န်ဆောင်မှုလက်မှတ်ကိုအီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ သို့မဟုတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်တွင် - ကိုယ်စားလှယ်၏ရွေးချယ်မှုအရအီလက်ထရောနစ်ပုံစံဖြင့်အီလက်ထရောနစ်စာရွက်စာတမ်းစီမံခန့်ခွဲမှုဖြင့်ရောင်းချသူထံပေးပို့သည်။ ရောင်းချသူသည် Agent ၏တည်နေရာရှိအေးဂျင့်၏လက်မှတ်နှင့်တံဆိပ်ပါသည့်စာရွက်ပေါ်တွင်ပေးအပ်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်မိတ္တူတစ်စောင်လက်ခံရရှိရန်တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ ရောင်းသူသည် ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်မိတ္တူတစ်ခုပြုလုပ်ရန်နှင့်ဆိုက်ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်သည့်အခါရောင်းသူကညွှန်ပြသည့်လိပ်စာသို့ရုရှားစာတိုက်မှပေးပို့ရန်မိမိစရိတ်ဖြင့်တောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၆.၅ ။ ၀ န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာအက်ဥပဒေကိုအကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်ကသက်ဆိုင်ရာအစီရင်ခံစာကာလကုန်ဆုံးပြီးငါးရက်အကြာတွင်ရောင်းသူထံသို့ပေးပို့သည်။
၆.၆ ။ ၀ န်ဆောင်မှုများအပေါ်အက်ဥပဒေကိုလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍ ပြက္ခဒိန်ရက် ၅ (၅) ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက်ရောင်းသူသည်ထိုလုပ်ရပ်နှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလက်မှတ်၏ပေးအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုလက်မှတ်ကိုမှတ်ချက်များရှိပါကရောင်းချသူသည်တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားသော Agent လှုံ့ဆော်မှုကိုစာဖြင့်စာရေး။ အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလမတိုင်မီတံဆိပ်ခတ်ပါ။
၆.၇ ။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလအတွင်းအေးဂျင့်အားဖြင့်လက်ခံရရှိပြန်ဆိုန်ဆောင်မှုများအပေါ်အက်ဥပဒေမှရောင်းသူအားဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုကန့်ကွက်၏မရှိခြင်းအတွက်, အေးဂျင့်ရဲ့န်ဆောင်မှုများမှတ်ချက်နှင့်သဘောထားကွဲလွဲခြင်းမရှိဘဲရောင်းချသူကလက်ခံခဲ့သည်, စနစ်တကျနှင့်အပြည့်အဝပြန်ဆိုခဲ့မှတ်ယူပြီးန်ဆောင်မှုအပေါ်အက်ဥပဒေအတွက်ပြAct္ဌာန်းခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏လုပ်ရပ်သည်တရား ၀ င်စွမ်းအားအပြည့်ရှိသည်။
၆.၈ ။ အေးဂျင့်မှပေးအပ်သည့် ၀ န်ဆောင်မှုများဆိုင်ရာအက်ဥပဒေသည် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်၏လစာပမာဏအချို့ကိုအတည်ပြုရန်လုံလောက်သောစာရွက်စာတမ်းဖြစ်သည်။
၇.၁ ။ ရောင်းချသူတာ ၀ န်ထမ်းဆောင်စဉ်အတွင်း ၀ န်ဆောင်မှု၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုအမှားများကိုဖော်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် Agent သည်လိုအပ်သောအစီအမံများပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သောအချိန်ကာလအတွင်းအာမခံချက်ပေးသည်။
၇.၂ ။ အေးဂျင့်မှပေးသောအာမခံအားလုံးသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၏အပိုဒ် ၇.၁ ဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အကျိုးဆောင်သည်ဤကမ်းလှမ်းချက်၊ တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်သောအခြားမည်သည့်အာမခံချက်မျှမပါ၊ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ အမှာစာများပမာဏနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏မပြတ်မတောက်နှင့်အမှားကင်းသောလည်ပတ်မှုအားအာမခံချက်မပါ ၀ င်ပါ။ ဝယ်သူ
၇.၃ ။ ရောင်းသူအာမခံ:
၇.၃.၁ ။ ရောင်းချသူမှအာမခံသည် Agent မှပေးသောနှင့်ဆိုက်တွင်တင်ထားသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်သည်အပြည့်အဝမှန်ကန်ကြောင်း၊ ဆိုက်ပေါ်တွင်ထင်ဟပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များသည်အခြားအင်တာနက်အရင်းအမြစ်များတွင်ထင်ဟပ်သောကုန်ပစ္စည်းများ၏ကုန်ကျစရိတ်ထက်ကျော်လွန်ရန်မသင့်ကြောင်းကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူကအာမခံသည်။
၇.၃.၂ ။ ရောင်းသူကသူသည်ရောင်းသူမှကုန်ပစ္စည်းများရောင်းဝယ်ရန်အတွက်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဖွဲ့အစည်းများ၏လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက် (လိုင်စင်) အားလုံးရှိကြောင်းအာမခံသည်။ သို့မဟုတ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေများ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီကုန်ပစ္စည်းများကိုရောင်းချရန်အထူးပါမစ်မလိုအပ်ကြောင်းအာမခံသည်။ ရောင်းသူကကုန်ပစ္စည်းရောင်းသူမှလုပ်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်ရန်အတွက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီအခြားလိုအပ်သောလုပ်ဆောင်မှုများအားလုံးကိုပြုလုပ်သည်ဟုအာမခံသည်။
၇.၃.၃ ။ အဆိုပါရောင်းချသူအာမခံနှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုအပေါ်ဥပဒေပြဌာန်းအပါအဝင်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်သူ့ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်၏တာဝန်ဝတ္တရား၏အေးဂျင့်ရဲ့ပွညျ့စုံ၏ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သူ့ကိုပေးသောပစ္စည်းများ (သတင်းအချက်အလက်), အခွင့်အရေးများနှင့်တရားဝင်အကျိုးစီးပွားကိုချိုးဖောက်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး non- ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများကိုချိုးဖောက်မဟုတ်ကြောင်းအာမခံ ကုန်ပစ္စည်းများ၏အမှတ်တံဆိပ်, ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏မူရင်း, မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆက်စပ်သောအခွင့်အရေးကိုကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ, ပုဂ္ဂိုလ်များ, စက်မှုဒီဇိုင်းများမှအခွင့်အရေး, လူများ၏ရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်း (လူနေမှု / ကွယ်လွန်သူ) အပါအဝင်ရောင်းသူသူတို့အားလုံးလိုအပ်သောပါမစ်လက်ခံရရှိကြောင်းအာမခံနှင့်သက်ဆိုင်ရာစာချုပ်များရေးဆွဲပါပြီ။
၇.၃.၄ ။ ရောင်းသူကအခြေအနေအမျိုးမျိုးပေါ်ပေါက်လာခြင်းကြောင့်ဝယ်သူသည်ကုန်ပစ္စည်းများလက်ခံရရှိရန်ငြင်းဆန်ပိုင်ခွင့်နှင့် (၎င်းကိုစာပို့ခြင်းဝန်ဆောင်မှုအတွက်ငွေသားပေးချေမှုကိစ္စတွင်) ငွေပေးချေရန်အခြေအနေများကိုအပြည့်အဝနားလည်ပြီးလက်ခံကြောင်းအာမခံသည်။ မျိုး။ ဝယ်ယူသူ၏ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်တောင်းဆိုမှုများသို့မဟုတ်မမျှတသောလုပ်ရပ်များ (မလှုပ်မရှား) ဖြစ်ပျက်မှု။ အကျိုးဆောင်သည်အကျိုးဆောင်သည် ၀ ယ်သူ၏သက်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ၀ ယ်ယူရန်နှင့် (သို့မဟုတ်) ပေးချေရန်ငြင်းပယ်ခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ထို့အပြင်ရောင်းသူ၏ဆုံးရှုံးမှု (ဆုံးရှုံးမှုအမြတ်အစစ်၊ အမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းစသဖြင့်) ၏ ဝယ်သူ၏ငြင်းဆိုမှု ဤအခြေအနေများပေါ်ပေါက်ပါကရောင်းသူကကုန်ပစ္စည်းဝယ်သူထံမှကိုယ်စားလှယ်မှရရှိသောငွေပေးချေမှုသည်ဝယ်သူမှငြင်းဆန်သောအခြေအနေနှင့်အကြောင်းပြချက်များကိုရှင်းလင်းခြင်းမရှိဘဲဝယ်ယူသူထံကိုယ်စားလှယ်မှပြန်လည်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုမိခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ထဲက။
၇.၃.၅ ။ ၀ ယ်သူသည် ၀ န်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု၍ ကုန်ပစ္စည်းများကိုစားသုံးသူများသို့ရောင်းချသည့်အခါရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏အထူးဥပဒေများကိုကုန်ပစ္စည်းများအကွာအဝေးရောင်းဝယ်ရန်စည်းမျဉ်းများအပြင်ဥပဒေအပါအ ၀ င်ကျင့်သုံးကြောင်းသတိပြုမိသည်။ စားသုံးသူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအပေါ်။
၇.၄ ။ အကျိုးဆောင်သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၇.၄.၁ ။ ရောင်းသူမှစာရွက်စာတမ်းများ (သတင်းအချက်အလက်) ကိုတင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်တင်သွင်းခြင်းပျက်ကွက်ခြင်း၊ သူနှင့်ပတ်သက်သောမှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက် (ရောင်းသူ) ၏အချက်အလက်များ၊ လက်တွေ့နှင့်မကိုက်ညီသောကြောင့်ဤသဘောတူစာချုပ်၏မပြည့်စုံခြင်းသို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောဖြည့်ဆည်းခြင်း၏အကျိုးဆက်များအတွက်အကျိုးဆောင်သည်တာ ၀ န်မရှိပါ။ ရောင်းချသူကသဘောတူစာချုပ်အရမိမိ၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများကိုအခြားမဖြည့်ဆည်းခြင်း / မလျော်ကန်စွာပြည့်စုံခြင်း။
၇.၄.၂ ။ အကျိုးဆောင်သည်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့် ပတ်သက်၍ အကြောင်းကြားစာများရှိနေခြင်းအပါအ ၀ င်ဖြစ်နိုင်သည့်ဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပွားခြင်းကိုကာကွယ်ရန်အကျိုးဆောင်၏လုပ်ဆောင်ချက်များအခြေအနေမည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်စားလှယ်သည်ရောင်းချသူ၏ဆုံးရှုံးမှုများ (အမြတ်အစွန်းပျောက်ဆုံးခြင်း၊ အမှန်တကယ်ပျက်စီးခြင်းစသဖြင့်) ဖြစ်ပွားခြင်းအတွက်တာဝန်မရှိပါ။ ။
၇.၄.၃ ။ အဆိုပါကိုယ်စားလှယ်သည်ဆိုက်အား သုံး၍ ရောင်းသူမှတင်ထားသောနှင့် / သို့မဟုတ်ဖြန့်ဝေသောကုန်ပစ္စည်းများ၏ပုံရိပ်အပါအ ၀ င်တတိယပါတီများကကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းအတွက်တာ ၀ န်မရှိပါ။
၇.၅ ။ မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကိုယ်စားလှယ်၏တာဝန်ယူမှုသည်ကိုယ်စားလှယ်၏တာဝန်ယူမှုပေါ်ပေါက်လာသောကြောင့်ရောင်းသူ၏လုပ်ငန်းတာ ၀ န် (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) ၏တာ ၀ န်အနေဖြင့်အမှန်တကယ်ရရှိသောကိုယ်စားလှယ်၏လုပ်ခပမာဏ၏ကန့်သတ်ချက်အတွက်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကန့်သတ်ထားသည်ကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
၈.၁ ။ အကယ်၍ အင်အားကြီးမားသောအခြေအနေများကြောင့် အကယ်၍ ဤသဘောတူညီချက်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်လုံးဝပြည့်စုံစွာပျက်ကွက်မှုအတွက်ပါတီများအနေဖြင့်တာဝန်ယူမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ၊ ပြည်နယ်အာဏာပိုင်များကလက်ခံခြင်းနှင့်ဤသဘောတူစာချုပ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုအပြင်ပါတီများကိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သောအခြားအဖြစ်အပျက်များအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။
အင်အားကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းအခြေအနေများတွင်ပါတီများအနေဖြင့်ဤသဘောတူစာချုပ်ပါတာဝန်ဝတ္တရားများကိုဖြည့်ဆည်းရန်သက်တမ်းသို့မဟုတ်ယင်းတို့၏အကျိုးဆက်များအတွက်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းထားသော်လည်းပြက္ခဒိန်ရက် ၃၀ (သုံးဆယ်) ထက်မပိုစေရ။ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများသည်ရက်ပေါင်း ၃၀ ကျော်ကြာမြင့်ပါကဤသဘောတူညီချက်အားထပ်မံသဘောတူညီချက်အရတရားဝင်ဖြစ်သောသဘောတူစာချုပ်ကိုဆိုင်းငံ့ထားရန်သို့မဟုတ်အဆုံးသတ်ရန်အတွက်ပါတီများအနေဖြင့်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၉.၁ ။ ရောင်းသူသည်ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံသည့်အခါရောင်းသူသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေနှင့်အညီရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း (ဆောင်းပါး ၄၃၃၊ ၄၃၈) နှင့်အညီဤကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းမျဉ်းများအရကိုယ်စားလှယ်နှင့်ရောင်းသူအကြားသဘောတူညီမှုကိုချုပ်ဆိုသည်။
၉.၂ ။ အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ပါကရောင်းသူမှလက်ခံပြီးနောက်လက်ခံသူကိုလက်ခံသည်။
၉.၂.၁ ။ ၀ ယ်သူသည် ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရွေးချယ်ထားသောအဆင့်အတန်းရှိသည့်“ စတိုး” နှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပြင်ငွေပေးချေမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များအပါအ ၀ င်ရောင်းသူနှင့်ပတ်သက်သည့်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုဤမှတ်ပုံတင်စဉ်အတွင်းပေးအပ်ခြင်း၊
၉.၂.၂ ။ အဆိုပါရောင်းသူကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖော်ပြချက်, ကုန်ပစ္စည်းများ၏အမည်, ဖွဲ့စည်းမှု, ဓာတ်ပုံ, စျေးနှုန်း, ရှုထောင့် (အတိုင်းအတာ) အပါအဝင်ကုန်ပစ္စည်း၏သတင်းအချက်အလက်, အရောင်း၏ (သတင်းအချက်အလက်အရာဝတ္ထု၏ဖန်တီးမှု) ၏စည်းကမ်းချက်များ၌လိုအပ်သောကဏ္completများ, ဖြည့်ဆည်းများအတွက်နောက်ဆုံးနေ့ကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖြန့်ဖြူးခြင်းကုန်ပစ္စည်းများ၏ပေးပို့) ။
၉.၃ ။ ရောင်းသူနှင့်အကျိုးဆောင်ကိုယ်စားလှယ်အကြားသဘောတူညီချက်သည်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်ခံသည့်ကိုယ်စားလှယ်မှလက်ခံရရှိသည့် နေ့မှစ၍ အပြီးသတ်ဖြစ်သည်။
၁၀.၁ ။ အဆိုပါကမ်းလှမ်းချက်သည်ကိုယ်စားလှယ်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်တင်ထားသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်မှ စတင်၍ အာဏာသက်ရောက်ပြီး၎င်းကမ်းလှမ်းချက်မှကိုယ်စားလှယ်အားရုပ်သိမ်းသည့်နေ့ရက်နှင့်အချိန်အထိတရားဝင်သည်။
၁၀.၂ ။ ကိုယ်စားလှယ်သည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များကိုတစ်ဖက်သတ်ပြင်ဆင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုရုပ်သိမ်းရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ကမ်းလှမ်းချက်၏ပြောင်းလဲခြင်းသို့မဟုတ်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုကိုယ်စားလှယ်၏ရွေးချယ်မှုအနေဖြင့်ရောင်းချသူထံသို့ Agent ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ရောင်းသူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုတင်ခြင်းသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာရောင်းသူ၏အီးမေးလ် (သို့) စာတိုက်လိပ်စာသို့သတင်းပို့ခြင်းဖြင့်ပေးပို့သည်။ သဘောတူညီချက်၏နိဂုံးမှာအဖြစ်က၎င်း၏ကွပ်မျက်စဉ်အတွင်းအဆုံးစွန်သော။
၁၀.၃ ။ ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရုပ်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းပြုလုပ်သော်၎င်းအပြောင်းအလဲများသည်ရောင်းသူအားအကြောင်းကြားသည့်နေ့စွဲနှင့် အချိန်မှစ၍ အခြားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကမ်းလှမ်းချက်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပေးပို့သောမက်ဆေ့ခ်ျတွင်လည်းကောင်းမပါရှိပါ။
၁၀.၄ ။ ထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုတွင်ထင်ဟပ်သောတာ ၀ န်ကျသောစာရွက်စာတမ်းများကိုကိုယ်စားလှယ်မှသူ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်းသို့မဟုတ်အတည်ပြုခြင်းဖြစ်ပြီးရောင်းသူ၏သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းကြားစာများအတွက်သတ်မှတ်ထားသောပုံစံဖြင့်ရောင်းသူကိုအာရုံစိုက်စေပါသည်။
၁၁။ သဘောတူညီချက်သက်တမ်းတိုးခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အဆုံးသတ်ခြင်း
၁၁.၁ ။ ဤသဘောတူစာချုပ်သည်ရောင်းသူမှကမ်းလှမ်းမှုလက်ခံမှုကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်နေ့ရက်နှင့် အချိန်မှစ၍ စတင်သက်ရောက်ပြီးအကန့်အသတ်မရှိဆက်လက်လည်ပတ်နေမည်ဖြစ်သည်။
၁၁.၃ ။ အောက်ပါအကြောင်းပြချက်များအတွက်သဘောတူညီချက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်:
၁၁.၃.၁ ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကြောင့်
၁၁.၃.၂ ။ ကိုယ်စားလှယ်၏ပဏာမခြေလှမ်းပေါ် မူတည်၍ ရောင်းသူအားရောင်းချမှုသို့သူတို့အင်အားမ ၀ င်မှီပြက္ခဒိန် ၁၅ ရက် (၁၅) ရက်ထက်နောက်မကျလျှင်၎င်းကိုဤကမ်းလှမ်းချက်ကထောက်ပံ့ပေးသည်။
အကယ်၍ ရောင်းသူကကိုယ်စားလှယ်မှအဆိုပြုထားသောပြောင်းလဲမှုများကိုကန့်ကွက်ပါကရောင်းသူသည်သဘောတူညီချက်အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ကြောင်းအမိန့် ၁၁.၄.၃ တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းခွင့်ပြုချက်ရသူကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတံဆိပ်ခတ်ထားသည့်စာဖြင့်အကြောင်းကြားစာကိုအေးဂျင့်ထံသို့ပေးပို့ရန်ခွင့်ရှိသည်။ ။ အမှန်တကယ်သဘောတူညီချက်
၁၁.၄ ။ စာချုပ်ကိုရပ်စဲနိုင်သည်
၁၁.၄.၁ ။ နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သဘောတူညီချက်ကြောင့်;
၁၁.၄.၂ ။ ရောင်းသူကဤကမ်းလှမ်းချက်အားဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည့်၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများသို့မဟုတ်အာမခံချက်ကိုချိုးဖောက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်သဘောတူညီချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝသဘောတူညီချက်ဖြည့်ဆည်းရန်အေးဂျင့်၏တစ်ဖက်သတ်တရားခွင်မတိုင်မီကငြင်းဆန်လျှင်။ သဘောတူညီချက်အားအကောင်အထည်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ကြောင်း Agent ၏အကြောင်းကြားစာကိုရောင်းသူထံသို့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်နေ့မတိုင်မှီ ၃ ရက် (၃) ရက်အတွင်းစာဖြင့်ရေးသားပေးပို့ပါမည်။ ဤကိစ္စတွင်ရောင်းသူသည်ပြစ်ဒဏ်ထက်ပိုသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများအားလုံးကိုကိုယ်စားလှယ်အားပြန်လည်ပေးဆပ်ရန်ကတိပြုသည်။
၁၁.၄.၃ ။ တစ်ဖက်သတ်ငြင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်ပါတီတစ်ခု၏ပဏာမခြေလှမ်းတွင်၎င်းကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝအကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက်အခြားပါတီအားအခွင့်အာဏာရှိသူကလက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာဖြင့်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ပြီးသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့မတိုင်မီ ၇ ရက် (ခုနစ်) ရက်ထက်နောက်မပါရှိပါ။ ဤကိစ္စတွင်ရောင်းသူသည်သဘောတူညီချက်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်အချိန်၊ ထပ်ဆောင်းအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ကုန်ကျစရိတ်များကိုအပြည့်အဝပေးအပ်သည့်အေးဂျင့်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးချေရန်တာဝန်ယူသည်။
၁၁.၄.၄ ။ ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏ဥပဒေနှင့်ဤသဘောတူညီချက်တွင်ဖော်ပြထားသောအခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၁.၅ ။ ပါတီများအကြားဘဏ္Financialာရေးအခြေပြုငွေပေးချေမှုများသည်သဘောတူစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် နေ့မှစ၍ (၅) ရက် (၅) ရက်အတွင်းပြုလုပ်သည်။
၁၁.၆ ။ သဘောတူညီချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တစိတ်တပိုင်းငြင်းဆန်မှုသည်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခု၏စည်းကမ်းချက်များ၌သဘောတူညီချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ငြင်းဆန်ခြင်းအားဖြင့်ဖော်ပြနိုင်သည်။
၁၁.၇ ။ သဘောတူညီချက်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်တစ်ဖက်သတ်ငြင်းဆန်ပါကဤသဘောတူညီချက်သည်ဤအသိပေးချက်အတွက်စည်းကမ်းချက်များသက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ အပြည့်အဝသို့မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာအပိုင်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့သည်ဟုမှတ်ယူရမည်။
၁၁.၈ ။ ဤသဘောတူစာချုပ်၏ရပ်စဲခြင်း (ရပ်စဲခြင်း) သည်ပါတီများအားအာမခံချက်၊ လျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်အခြေချနေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများအပါအ ၀ င်စာချုပ်အားချုပ်ဆိုခြင်းမတိုင်မီကပြုလုပ်ခဲ့သောတာ ၀ န်များ၏မစွမ်းဆောင်နိုင်မှုနှင့် / သို့မဟုတ်မလျော်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်တာ ၀ န်မှလွတ်မြောက်စေခြင်းမရှိပါ။
၁၂.၃ ။ အကယ်၍ ရောင်းသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုရရှိနိုင်ပါက၎င်းတို့အားပြုပြင်ခြင်းကို Agent ၏သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီနှင့်အညီပြုလုပ်သည်။
၁၂.၄ ။ အေးဂျင့်သည်ရောင်းသူနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုအတည်ပြုရန်သို့မဟုတ်လိမ်လည်လှည့်စားသောလုပ်ဆောင်မှုများကိုတားဆီးရန်အတွက်လိုအပ်ပါကနောက်ထပ်လိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သူကသက်သေခံအထောက်အထားမိတ္တူ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ၊ အကယ်၍ ထိုကဲ့သို့သောနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုကိုယ်စားလှယ်ထံသို့ပေးအပ်ပါက၎င်းအားကာကွယ်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုအပိုဒ် ၁၂.၃ နှင့်အညီဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ကမ်းလှမ်းချက်များ
13. လက်ရေးလက်မှတ်၏ analogue အပေါ်သဘောတူညီချက်
၁၃.၈ ။ ပါတီများအနေဖြင့်အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ်သော့၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသေချာစေရန်ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ရောင်းသူသည်သူ၏မှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက် (login နှင့်စကားဝှက်) ကိုလွှဲပြောင်းသို့မဟုတ်တတိယပါတီများမှအားမိမိ e-mail ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးပိုင်ခွင့်မရှိပါ, ရောင်းချသူ, သူတို့ရဲ့လုံခြုံမှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းအသုံးပြုမှုအတွက်အပြည့်အဝတာဝန်ရှိသည်လွတ်လပ်စွာသူတို့ရဲ့သိုလှောင်မှု၏နည်းလမ်းများအဆုံးအဖြတ်အဖြစ်သူတို့ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကန့်သတ်။
၁၄.၁ ။ အဆိုပါစာချုပ်, ၎င်း၏နိဂုံးချုပ်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအဖြစ်ကွပ်မျက်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေပြဌာန်းခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်နေကြသည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်အားဖြင့်ဖြေရှင်းခြင်းသို့မဟုတ်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (အပြည့်အဝမပြည့်စုံသေးသော) ဖြေရှင်းခြင်းမရှိသောကိစ္စရပ်များအားလုံးသည်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အညီစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သည်။
၁၄.၃ ။ ကမ်းလှမ်းချက်တွင်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါကသဘောတူစာချုပ်ရှိအသိပေးစာများ၊ စာများ၊ မက်ဆေ့ခ်ျများအားလုံးကိုပါတီတစ်ခုကအခြားပါတီသို့အောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်ပေးပို့နိုင်သည် - ၁) အီးမေးလ်ဖြင့် - က) အပိုင်းတွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာမှ ကမ်းလှမ်းချက်၏ ၁၅၊ အကယ်၍ လက်ခံသူသည်တာ ၀ န်ကိုပြီးစီးသောအခါသူကသတ်မှတ်ထားသောရောင်းသူ၏အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ရောင်းချသူဖြစ်လျှင် (သို့) သူ၏ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တွင်လည်းကောင်း၊ ခ) အီးမေးလ်လိပ်စာမှကမ်းလှမ်းမှုအပိုင်း ၁၅ တွင်ဖော်ပြထားသည့်ကိုယ်စားလှယ်၏အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါတာ ၀ န်ကိုဖြည့်စွက်သောအခါသူ၏ရောင်းသူမှသတ်မှတ်ထားသောသို့မဟုတ်သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ (၂) ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကောင့်ရှိရောင်းသူအားအီလက်ထရောနစ်အကြောင်းကြားစာပေးပို့ခြင်း။ ၃) လက်ခံရရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုစာဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသောစာဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ လိပ်စာသို့ပို့သူကိုပေးပို့ခြင်းကိုအတည်ပြုသည့်စာပို့ခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊
၁၄.၅ ။ အဆိုပါပါတီများ, ယင်း၏အကြောင်းအရာသည်၎င်း၏ကွပ်မျက်၏အချိန်မှာတရားဝင်ကမ်းလှမ်းချက်နှင့်ကိုက်ညီရမယ်, ရေးသားထားသောစက္ကူစာရွက်စာတမ်း၏ပုံစံအတွက်နိဂုံးချုပ်အေဂျင်စီသဘောတူညီချက်ထုတ်ပေးရန်အချိန်မရွေး, ကမ်းလှမ်းချက်၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အတူဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲကျော်လွန်သွားခြင်းမရှိဘဲ, အခွင့်ရှိသည်, ၏ထင်သာမြင်သာစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ကွပ်မျက်ခံရအမိန့် (တာဝန်) ) ။
အဆိုပါအေးဂျင့်၏ 15 အသေးစိတ်